Ukudibanisa kombala – Color Combinations
Gospike.net ulwazi olunika ubungakanani bemibala ngokuzenzekelayo emva kokulayisha kwizixhobo zokukhetha umbala. Xa kunzima ukufumana imibala engaphezulu kwamashumi asithoba, le webhusayithi ibonelela ngezixhobo ezichanekileyo zokulinganisa imibala kwimifanekiso. I-Gospike.net iphumeze isixhobo sokukhetha umbala ofanelekileyo, kwaye uyafumaneka ngesayizi, ngalo naliphi na ixesha naphi na. Xa uku-intanethi, isixhobo sakho siya kulayisha kwaye sifumane ubungakanani bombala kwaye ubonise uluhlu lwemibala oyifunayo. Umzekelo ngumfanekiso wombala, igama lombala, ubungakanani bemibala kunye nokudibanisa imibala. Le yindawo entle. Kuba mininzi imibala efunyenweyo kunye nobungakanani. Kwaye enye inzuzo kukuboniswa koluhlu lwesayizi yemibala ngokukhawuleza. Ke, khangela kwaye uyonwabele le ndawo ukufumana imibala eyahlukeneyo.
Ngokubanzi, umbala oqaqambileyo unika imincili kwaye uyolo. Ukusetyenziswa kombala kuxhomekeke ebantwini. Njengombala egumbini okukholelwa ukuba uyakwazi ukuvuselela imisebenzi yengqondo nangokwengqondo. Ukuba umbala ufanelekile kwaye uyawuthanda umbala, oku kunokuba nefuthe ekwandiseni ubuchule bakho bohlalutyo. Umbala unempembelelo ezininzi kobu bomi nakwingqondo yethu. Ekusetyenzisweni kweentlobo ezahlukeneyo zemibala, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka ihlala inxulunyaniswa nobungcali kunye nokuthembana. Ngapha koko, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka yenye yemibala esisiseko kwaye iyakwazi ukudibanisa neminye imibala, umzekelo yindibaniselwano yombala osisiseko ukuba imibala eluhlaza okwesibhakabhaka ithululelwe kunye neminye imibala esisiseko efana nemibala etyheli ukuze iziphumo zibe yimibala eluhlaza. Mhlawumbi, esi sesona sizathu sokuba le mibala ithandwe. Ke, lo mbala kufanelekile ukuwusebenzisa kwigumbi. Ngaphandle kokudibanisa imibala eluhlaza okwesibhakabhaka, i-beige kunye ne-brown ziye ziba yimibala ethandwa ngabantu abaninzi, besebenzisa imibala eludongeni lwabo. Kwaye ngoku, umbala othambileyo ukwaziwa ngokukhethekileyo kubantu abancinci. Ngaphandle kwemibala esisiseko, ukudibanisa imibala kunye nevili lemibala eliba sisixhobo esikhethekileyo kule webhusayithi, kukwakho iintlobo ezahlukeneyo zoyilo lwendlu kunye nokupeyinta kunomdla kunombala. Kuba, ukusuka kwimibala esisiseko kunye nemibala yokudibanisa ebonelela ngale webhusayithi, singasebenzisa imibala eludongeni, kwifenitshala okanye ekupeyinteni. Kule webhusayithi, uninzi lwezinto zangaphakathi zoPendi kunye noYilo lwaNgaphandle onokulufumana okanye lokuzikhuphela. Imibala emininzi yepeyinti yodonga inokwenza ikhaya lakho lihle kwaye likhululekile ukubeka. Uyilo olugqityiwe ngomhombiso omangalisayo, unokuba ngumfutho wokuhombisa indlu yakho. Uyilo oluneenkcukacha luya kuboniswa ngokupheleleyo kule webhusayithi. Ayisiyonxalenye yendlu kuphela, kodwa kwigumbi ngalinye elinemihlobiso. Umzekelo, uyilo lwegumbi lokulala luxhotywe ngemibhede yasentwasahlobo, iipilo, iibhlogo, ifenitshala, isibane sokulala nodonga lokuhombisa nodonga. Ngokhetho oluninzi loyilo kunye nemibono yoyilo, kwenza kube lula kwaye kungathathelwa ingqalelo kokukhetha uyilo kunye nemibala efanelekileyo endlwini yakho.